Kdenlive 21.04 inosvika nezwi nyowani-kune-zvinyorwa sarudzo | Linux Vakapindwa muropa
Kdenlive 21.04 inouya nezwi nyowani-kune-zvinyorwa sarudzo, kugadzirisa mashandisiro uye anopfuura mazana mashanu bug fixes
Mukuburitswa kweKdenlive kwazvino, KDE iri kuwedzera matani ezvinhu zvinobatsira, uye kutaura chokwadi handizive kana ndiri kufara kana kutya. Iyo mikana inowanzo kuve yakanaka, asi kana iwe uchimhanya zvakanyanya unogona kugumburwa, uye ndizvo zvave zvichiitika kune imwe yeakanakisa uye anozivikanwa mavhidhiyo edhita anowanikwa eLinux. Mwedzi mina yapfuura, semuenzaniso, vakawedzera chimiro chemavhidhiyo akatwasuka kuratidza kumashure kunoenderana nemufananidzo mukuru, uye nezuro akazivisa kuvhurwa de Kdenlive 21.04 uye rinosvikawo rakatakura nhau.
Iyo KDE chirongwa chinotaura kuti ivo vakagadzirisa zvakanyanya iyo interface uye usability yeiyo software, nepo zvakare vakagadzirisa mishonga yakawanda, vanopfuura mazana mashanu mumwedzi ichangopfuura. Kune rimwe divi, ivo vakawedzera zvinonakidza zviitiko senge imwe ichazongoerekana yanyora chero odhiyo kune mameseji vachishandisa Vosk yekuziva chishandiso Pazasi pane iwe unemashoko akatanhamara akauya kubva kuruoko rweKdenlive 500.
1 Kdenlive 21.04 Zvinoratidza
2 Iye zvino yawanikwa
Kdenlive 21.04 Zvinoratidza
Chinyorwa chekunyora kupfuudza kutaura kune zvinyorwa. Parizvino inotsigira mitauro gumi nemitanhatu, asi iwe unofanirwa kurodha pasi modhi uye wobva waiwedzera seduramazwi kubva kumagadzirirwo.
Kuvandudzwa kweiyo interface uye usability. Zoom mabara akagadziridzwa kuti zvive nyore kuswededza mukati kana kunze. Parizvino inowanikwa kune yakatwasuka uye munguva pfupi iri kuuya ichamira zvakare.
Ruzivo rweakakosha ma link akawedzerwa kuruboshwe, nepo ruzivo rwezvinhu zvemamiriro ezvinhu rwakaendeswa kurudyi kwetabharari yemamiriro.
Nguva yacho yakagadziridzwa uye giraidhi uye mucherechedzo mavara ave kutaridzika zvirinani, iwo magiraidhi ave pamusoro pemutongi.
Nyowani nyowani yemultimedia kuitira kuti zvitiitire nyore kuwana mafaera.
Yakagadziridza iyo kiyiframe pani.
Mitsva mitsva, senge zvinyorwa zvinowoneka zvishoma nezvishoma. Tsamba, mazwi, kana zvirevo zvinogona kuoneka.
Iyo alpha strobe ikozvino inogona kuiswa kune zvinyorwa, mifananidzo kana mavhidhiyo.
Kugadziridzwa kwemimwe mhedzisiro, senge iwo enzvimbo dzesarudzo.
AV1 inopa mbiri yakawedzerwa.
Wakawedzera "unused clip" firita muPurojekiti Trash.
Chiteshi sarudzo yakawedzerwa kune odhiyo waveform firita.
Wakawedzera ITU 2020 ruvara nzvimbo mune clip zvivakwa.
Reactivation yekumhanyisa kumhanyisa odhiyo yekutamba.
Yakagadziridzwa Flatpak kuenderana.
Caption kubatwa nekhibhodi inobvumidzwa.
Bata maGIF sevhidhiyo, kwete mufananidzo.
Yakagadziriswa mazhinji anovaka yambiro uye inogadzirira Qt6.
Yakagadziriswa kubviswa kweslideshow clip.
Maumbirwo eAlfa: anotendera iwe kuti ubude pachiratidziri.
Iye zvino yawanikwa
Kdenlive 21.04 yakasvika sechikamu che KDE Gear 21.04, uye yave kuwanikwa pa Flathub uye sei AppImage. Kune zvakare repository inowanikwa yeDebian / Ubuntu iyo yatinogona kuwedzera nemirairo iyi:
Zvimwe zvinogoverwa, senge izvo zvakavakirwa paArch Linux, vatove vazvowedzera kune avo epamutemo marekodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kdenlive 21.04 inouya nezwi nyowani-kune-zvinyorwa sarudzo, kugadzirisa mashandisiro uye anopfuura mazana mashanu bug fixes
Manjaro 21.0.3 ikozvino inoita kuti iwe uise Linux 5.12 mune ayo ese edhisheni uye KDE Gear 21.04 inouya ku KDE